Ukufunda izilimi zakwamanye amazwe kuyadingeka - kungcono abantu baqaphela isikhathi eside. Futhi uma ngaphambili kakhulu "egijima" kwaba isiNgisi, manje ingezwe ku-ke futhi ezinye, kokubili European nokuningi ezingavamile. Emzamweni ukusiza bonke abafisa ukufunda ulwazi othisha ososayensi ngokushesha beveza izindlela ezintsha yokufunda. Kwaduma kakhulu, isibonelo, ucwaningo English by Pimsleur. Sinikeza ukuthola namuhla lokho kuphawuleka.
Kungani ukufundisa ezinye izilimi?
Nge Kuhlangana okusheshayo emazweni kusuka amaphuzu kwezomnotho, kwezombusazwe, ezenkolo, ezamasiko nezinye umbono, ukwazi nje ngolimi abaluncela isibe okunethezeka. English - ubuncane ezidingekayo, okungaba wusizo kunoma yimuphi umuntu nganoma isiphi isikhathi. Foreign ezitolo inthanethi, yokusetshenziswa, ezinye izihloko ezikhethekile kakhulu, izincwadi ezithakazelisayo futhi amabhayisikobho, travel - ukufinyelela eziningi ezinhle lwesintu futhi ukubona amandla aphelele isidingo sabo ukwazi okungenani eyodwa olunye ulimi.
Akumangazi ukuthi, kokuba wakuqaphela lokhu, abantu basungula izindlela ezihlukahlukene evumela ukufunda amakhono amasha masinya, ngamanye amagama - ukuqala ukukhuluma futhi baqonde interlocutors bakwamanye amazwe. Lezi zindlela isekelwe ezimisweni ezahlukene kakhulu.
Izimiso eziyisisekelo isifundo
Polyglots futhi umsebenzi bathi uma ufuna ongayifunda yiluphi ulimi. Ukuze ezinye kulula ukwenza umuntu nzima, kodwa kubaluleke kakhulu ukuba sigcine izimiso ezimbili: umkhuba olunzulu futhi njalo. Kukholakala ukuthi yokufunda ngempumelelo kakhulu izilimi zakwamanye amazwe kusuka amaqembu amathathu amakhulu: ukufunda, ukulalela nokukhuluma. Ngokuphathelene Isimiso sesibili, kulula kakhulu - ungakwazi bahlanganyele kancane kakhulu, kodwa zonke izinsuku. Kungcono uma siyohlale ukwenza ulwazi olusha, kanye ukuphindaphindwa lendawo ubudala. Okwakuhlalwa kuzo lapho kusaqalwa, ungakwazi ukugxila silulumagama, luhlelo lwelulwimi, futhi, kodwa kuyodingeka ngokushesha kakhulu, isikhathi eside kangaka dengwane ke ngeke zisebenze.
Nokho, naphezu kweqiniso lokuthi isidingo ukufundisa into efanayo, kungenziwa ngendlela ehluke kakhulu. Izazi zolimi, abahumushi, izazi zolimi futhi nje abathanda baye basungula izindlela eziningi kangaka eminyakeni edlule.
Ingasaphathwa mode ngamunye ngqo, evamile kubo bonke zingahlukaniswa zibe 6 namaqembu amakhulu, kusebenzisa izindlela ezithile ngekhanda. Ngakho, kukhona izindlela ezilandelayo eyinhloko ukufunda olunye ulimi:
Traditional (lucebe futhi phakathi kwezakhi zolimi). Naye ukwazi, ngaphandle kokukhetha, ngoba ngokuvumelana nale nqubo zisekelwe izinhlelo zokuqeqesha ezikoleni eziningi. Ngokusho le ndlela, ulimi, ngekhanda kusekelwe ekutadisheni amagama kanye imitsetfo yeluhlelo, ekubhaleni iziphakamiso zayo futhi translation zombili izinkomba. Ngu le ndlela uhlelo kungenziwa eyakhelwe ezihlukahlukene izimiso, kodwa sonke sihlanganyela into eyodwa - umkhuba asebenzayo njalo.
Ngena ku imvelo. Ngokuvamile, le ndlela kuhilela hambisa zesikhashana ukuba ngolimi okuhunyushelwa kulo. Nokho, ngaphandle kolwazi sakugcina esafuna kuyize - kungcono ukuthola ulwazi olufanele kanye kokuzisebenzisa izimiso zabo eziyisisekelo. Buhle le ndlela njengoba injalo okumsulwa ngesikhathi esifanayo ukuqonda futhi izinkambiso zakulelo zwe, ikakhulukazi ukuphila kwakhe, njalo njalo. D. Ngakolunye uhlangothi, ingase ilahleke selimazi.
indlela Luchumano. Namuhla-ke sesibili ethandwa kakhulu ngemva bendabuko. Kulokhu, umgomo - zingafundi ukufunda noma ukubhala sipho ezomile ezingahlobene yokuphila futhi siqale uxhumane nabantu usebenzisa ulwazi lwabo. Leli qembu amasu ubhekwa eziphambili kakhulu futhi ephumelelayo, ukuze kwayo futhi akumangalisi lokhu. Kahle uhlelo esakhiwe anganika Imiphumela brilliant ngempela.
Indlela ukuhlala ekuthuleni kokufa. Le ndlela isikisela ukuthi uthisha akakwazi "asebeke bangenza ngathatheka" igunya labo kwi umfundi, akuphazamisi ezingeni lolwazi lwabo, kodwa nje litshela. Ngokusho le ndlela, ngolimi okungelona lwakubo akuyona wayesememeza umsindo, kuze kube sekupheleni ebhaliwe cwaningo futhi ufunde imithetho. Le ndlela elahlekile ngokushesha ngempela udumo, cishe ngenxa isikhathi esiningi yayo futhi ukusebenza kwezinye izinto ezingabazisayo.
ngokomzimba impendulo indlela. Le ndlela futhi isebenza engavamile kunalokho ngenxa yokuthi bonke kolwazi abafundi kufanele ngokoqobo "idlule ngokwayo." Izifundo zokuqala zisekelwe cwaningo tento okuyiwona umfundi ngamunye ngokuhamba kwesikhathi iqala benzenjani. Ngesikhathi elithi "uthole" Senza isenzo edingekayo, ngaleyo ndlela ngeke ukukhumbula amathokheni abstract, okujikeleza inkumbulo associative.
indlela Audiolingvistichesky. Ngokuvamile, kusekelwe kuminyana elula "lalela - phinda". Akukhona wonke umuntu, ngoba ukulalela iyakhiwa kahle ambalwa. Kuyinto kuleli qembu futhi osebenza zimenyezelwe kabanzi Dr. Pimsleur indlela. Kodwa lokho ukuthi ivelele kuleli qembu?
Pimsleur Indlela: Essence
Le ndlela libhekisela zokugcina, iqembu audiolingvisticheskoy. Inkambo ejwayelekile iqukethe izifundo 90 ihlukaniswe amazinga amathathu. Eyokuqala - Wabasaqalayo kanye nezinye ezimbili - ukuze uqhubeke.
Ngokusho umdali ngenxa yendlela entsha yokuzenza, oqeqeshwayo akudingi izincwadi, kusuka sezifundo zokuqala kakhulu angakwazi uqale ukukhuluma. Kuthiwa le ndlela yomthetho futhi has amashumi eminyaka esetshenziswa US bezobunhloli.
Empeleni, konke yangempela ukulalela ngokuphindaphindiwe futhi ukuphindaphinda ezinye imishwana eyayivame ukuthi engimbumbile amaphethini athile zokuxhumana. Lena abalulekile, kodwa futhi ulimi iphelile.
Nguleso naleso sigaba ihlala ayisekho kwesigamu sehora, ngoba kukholelwa ukuthi isikhathi eside amasondo kanye kunciphisa izinga nogqozi umfundi. Ngaphezu kwalokho, ososayensi bakholelwa ukuthi lena yinkathi ubuchopho assimilates ulwazi olusha kakhulu ngempumelelo. Ezemfundo kuhilela isifundo esisodwa ngosuku, ngakho yonke inkambo imayelana 3 izinyanga.
Izifundo indlela uDkt Pimsleur lokucabanga ukuphindaphinda njalo ulwazi olutholakele phakathi izifundo esidlule, futhi kamuva kuvele njengamadiski izabelo ezihilela ukuhunyushwa imishwana ngaphambilini ngekhanda. Ngakho, kukhona ukuqeqeshwa inkumbulo futhi kumiswa amaphethini esiqhubekayo etimeni letehlukene.
Njengoba sekushiwo, cishe yonke amasu audiolingvisticheskie azizivuni imizamo umfundi. Ayasiza njengendlela ukwesekwa, umkhuba xaxa, kodwa indlela eyisisekelo. Ngamandla abo, izifundo indlela uDkt Pimsleur akuyona into ezintsha noma ukufohla. Nokho, kwaba isinyathelo esihlakaniphile leso ukwenza isikhathi sesifundo ezingekho ngaphezu kwesigamu sehora, ngoba kungenjalo abafundi ingcuba ngokushesha futhi waqala ngokungagwegwesi nesithukuthezi.
Yiqiniso, wonke umuntu ufuna ukuba uthole isimangaliso indlela ngokushesha uqale ukukhuluma ngolimi okungelona lwakubo futhi balithole, kodwa ngeshwa, kungenzeki. Ukuthola ulwazi, futhi ikakhulukazi endaweni eziyinkimbinkimbi ezifana lidinga. Mhlawumbe yingakho ngakho bayahlonishwa polyglots.
Ngaphezu kwalokho, uPawulu Pimsleur izindlela zokufunda ulimi wafunda ikakhulukazi izingane isibonelo ukuthi kulo mqondo, sihluke kakhulu abadala.
Ungafunda izilimi eziningi (Japanese, isiShayina, isiGreki, isiHindi, Arabhu, isiFulentshi, iSpanishi, isiJalimane) indlela Pimsleur. Libuye kancane kuholela ezinye reflection, ngoba akukho izixazululo jikelele kungaba. Nokho, ukukhethwa elikhulu kangaka itholakala kuphela kulabo kakade isiNgisi, lonke kumele ulandele noma ingasaphathwa. Kungakhathaliseki ukuthi ehlangene wokudamba kancane kancane isithakazelo kule nqubo ngemva kokufa kumdlali, noma ukungabaza mayelana ukusebenza yayo - alaziwa.
Ngokwesibonelo, indlela Pimsleur ngoba Russian kungagcini kuphela ulimi ethandwa kakhulu - IsiZulu. Nokho, kukhona inala analogs kokuba iqoqo elikhulu kakhulu kodwa mayelana nomphumela ofanayo. Bambalwa audiokurs okubandakanya ekutadisheni lolimi, abanakwazi yenani kuyehla kube cishe zero.
Njenganoma yimuphi indlela audiolingvistichesky, Dr. Pimsleur indlela ngokushesha edonsa indlela efanele yokubiza amagama futhi sifunde ukuqonda inkulumo angaphandle ngu indlebe. Ngaphezu kwaloko, akukho ehlukene ngekhanda amagama nemisho inika inzuzo ezithile abafundi ngokuvamile beswela nezinye izindlela. Kulokhu umuntu akanayo ukwakha umusho ngolimi lwakho lwendabuko futhi kuphela ke ulithumele ilungelo. amaphethini neziLimi avunyelwe Indlela abasabela ngayo ezimweni ezithile ngokushesha, ngaphandle kokulibala, njengoba umkhuba njalo ukhiqiza impendulo ngalokuvakalako. Nokho, ngesikhathi esifanayo liphinde lokususa.
Yiqiniso, umfundi uzokwazi ukubuza umbuzo kumuntu wesinye isizwe, ngisho ukuqala inkhulumomphendvulwano, kodwa yimuphi ukuphambuka kusuka "ejwayelekile" kuyoba uhlobo ukushaqeka empeleni eyodwa kanye Kungashiwo okufanayo amagama ahlukene ngokuphelele. Ukubuyiselwa noma yiliphi igama ethi zamanje kunikezwa emangalisayo nzima, futhi izifundo Pimsleur indlela kule uzilungiselele hhayi kahle.
Omunye ethile sina kuyindlela ebhekiwe kuphela inkulumo. Kwakheka silulumagama lolulingene futhi lolimi ngokuvamile uhlala ezibalulwa kanjena ngokufanele. Ngaphezu kwalokho, abafundi bese kuba kunzima ukuhlobanisa ulimi telulwimi lolukhulunywako. Ngakho ukukhuluma mayelana balifundisise futhi olubanzi akudingekile, uma kuphela sebenzisa Pimsleur indlela.
Ukusabela kule ndlela impikiswano. Abaningi zibabaza le nqubo, abanye bakholelwa futhi kuwukuchitha imali nesikhathi. Kunzima ukusho ukuthi ubani kwesokudla. Iningi basavuma entweni eyodwa - kule nkambo kusiza labo abafundisa ulimi kusuka ekuqaleni, kodwa namanje kangcono sihlanganise ngayo ukuthuthukiswa imitsetfo yeluhlelo. Kunoma yikuphi, ungazama futhi unqume ukuthi indlela ethile kufanelekile noma cha umfundi ethile njalo. Phela, izindlela zokufunda kanye inkumbulo zihluke kakhulu ngaso sonke.
UDkt Pimsleur indlela ingaba ithuluzi elihle kulabo, ngesizathu esisodwa noma kwenye musa ukukhuluma ulimi lwakhona ngesikhathi esifanayo ukukwazi ukubhala, ukufunda bahlanganise iziphakamiso. Kuyasiza ngcono your pronunciation, zifana kuya wenza ezinye izinto, kodwa uma ukhuluma nayo ngokuzibulala njengoba indlela eyinhloko ekutadisheni yiluphi ulimi kungaba alilungile. It kungafika noma kulabo, isibonelo, kafushane waya ezweni elikude, futhi badinga izochazwa izihloko aphansi kwansuku zonke. Ukuze uthole olunye Ukulifunda ngijule yaleli su asifanele.
Listening - okuyisici esibalulekile umkhuba, uyazi umuntu owake nazo ekuthuthukiseni olunye ulimi. Abafundi abahumushi bachitha amahora amaningi endaweni yokucwaninga ulimi, kodwa lokho kumane nje kuyingxenye isithombe uma kuziwa mayelana Ukufunda izilimi zakwamanye amazwe. Ngakho akufanele kugcine kuphela le ndlela, zifana ukufunda silulumagama, luhlelo lwelulwimi, miyalelo, nezinye izici ezibalulekile. Ngakho Pimsleur indlela akuyona "panacea", kodwa kungakusiza kakhulu abafisa ukukhuluma ngolimi okungelona lwakubo.
Imithandazo Virgin Ubusisiwe sabantwana impilo yabo